Kupomba kwekupedzisira | Professor Poeta
Pfuti yakanga yarova pakati pechipfuva. Chiedza chezuva chakapenya kutsvuka kwenyama uye kubuda ropa kwakapararira munzira, kumhanya mumugwagwa uye kuunganidza vanhu vakatonyanya kuda kuziva. Pasi, akaputirwa neropa, aigona kunzwa ruzha rwevanhu vachiti:
“Waita zvakanaka, siya zvakadaro”. “Pano iwe ita, pano iwe unobhadhara”. “Bhanditi, anga aine iyo
Ikoko, akarara akatambanudza maoko ake, achitambura achimirira kuzorodzwa, murwi akasvetuka pakati pehupenyu nerufu, pakati pedenga nehero. Izvo zvese zvaive zvaitika nekukurumidza. Kubva pane sarudzo yekurwisa kusvika kusvika kwemapurisa. Kuchinjana kwemoto, adrenaline yekutiza uye kwekanguva chokwadi chekuti kutiza kwaive kwechokwadi, asi chakakanganiswa nenjodzi, ichiteverwa nekumanikidzwa kwebara rakapfuura nekumusana kwake, richisiya chipfuva. Zvese zvinhu zvaimhanyisa uye ikozvino nguva yapfuura, iyo mweya wakadzikadzika waisagona kuyera.
Maziso akaremerwa akarwisa kutarisa pachiedza, pamwe vaizoona chiso chavanoziva, mumwe munhu wavanogona kukumbira kwaari. Asi maziso anorema aisatomboona vanhu vaiseka nekutaura zvinhu nezve tsotsi. Uye nekudaro, pamusoro pekunyadziswa kweropa rinouraya, mumamiriro ezvinhu anoshungurudza, ini zvakare ndakaziva kuti ndaifanira kutakura dambudziko rekushurikidzwa. Aive mbavha uye aitakura huremu hwese kwaaienda.
Achidzora, akanzwa kuti hupenyu hwake hwaive hwadzikira. Kuti sarudzo dzese dzematsotsi pamusoro pemakore dzaizotora mutero wadzo uye kugadzirisa kwacho kwaizovapo, kwaisazove nekuregererwa. Akanzwa kuneta, kunyadziswa.
Ini ndakanga ndisisina kana fungidziro, hope dzakanyangarika uye izvo zvaisave zvitsva, zvaive zvisiri zvechiitiko ichocho. Iko kunyara kwekuve aripo, mune mamiriro enhamo dzevanhu uye kutya kwezvakange zvichakurumidza kuuya, ikozvino sezvo muviri wake waive wekusungira rufu kwakamuita kuti ade, muchidimbu, kuti anzwisise kuti akaremerwa nekuparadzwa nenzira iyoyo. Wakasvika sei pane izvi? Zvakaguma sei seizvi … Mubhedha wake wega munzira yemugwagwa uye seshamwari chete vanhu ivavo vaiseka nekutonga kutambura kwake chete.
Akanga asina kumbove mwana kuna amai vake, anga asina kumbobvira ave nematoyi evana, anga asina kutamba nevhu, kana kumhanya mumigwagwa? Nekudaro, ikozvino, akarara pamucheto wegomba rakadzikadzika, pamucheto wehupenyu, nerufu pazvitsitsinho zvake. Yakanga iri, ipapo, denda revanhu munzira yakasviba, uko inert, kunyimwa ndangariro dzekare uye tariro yeramangwana, akasara nekurwadziswa kwazvino chete, husiku hwekutyisa kukuru.
Akanga asingazive kuti yaive ani, aisaziva kuti akaba zvakadii, kana kuti angadai akaba kangani. Aisaziva vanhu vakakuvara, kana zvikonzero zvakamutungamira kuba, aingoziva kuti imbavha. Zvisinei, akakwanisa kurangarira kutaura kwevamwe vakaurayiwa, kutya kwakaratidzwa mumeso avo uye kusava nehanya nazvo kwenguva yakareba zvakadaro. Aigona kurangarira vamwe vakadzi, vane chiremerera chaaimbovabira dzimwe nguva.
Akanzwisisa pakati pekushomeka uye kufunga kwakapusa kweavo vatotambura nekusekwa uye kudenha kwevanhu vanoda kuziva vakamukomberedza.
Uye kunyange moyo wembavha yake wakagumbuka nekuvepo, uchizvibvarura nepamweya, uine mweya une nzara. Ndingaite chero chinhu kuti ndichinje mamiriro ako.
Yakauya mupfungwa, yatove kunetsekana nekutya kuguma kuri kuuya, kune kutaura kwamai vake, avo zvino vaitaridzika kunge vakasuwa.
Zvingadai zvakagara zvakadaro here? Pfungwa padzakadzungaira mukufunga, akarangarirawo makore mashoma aaive kuchikoro.
Hwehudiki hwake hwakanga hwakatsikwa-pwanywa nguva zhinji uye chikamu chake chakashata chakange chafa kare. Akarangarira mazuva akachinjana husiku hwaisazopa chinhu muhupenyu hwake. Akarangarira kusurukirwa mambakwedza mumigwagwa, uyo asina kudzoka kumba nekunyara uye nekuzvidza hupenyu hwake. Pakati pekupenya uye ndangariro dzakatemwa, aive ave nechokwadi chekuti akange ave mwana, anga ari mudiki uye anga aine nguva muhupenyu hwake husina kujeka paangadai akaita dzimwe sarudzo. Zvino, pamwe, akavezwa akaona kuti zvese zvagara zviri sarudzo.
Nesarudzo yekupedzisira yekuzvimiririra kwevanhu, akaedza kufambisa muviri wake, uyo wanga uchiri kushaya basa, uchiri kuyedza kuchengetedza mweya uyo wanga uchitoedza kuzvibvisa pauri. Ane muviri usinganzwiri tsitsi, akarangarira kubatwa-bvarurwa, aiziva kuti zvainge zvakadii, akange atopuruzirwa, kunyangwe hazvo aivewo gororo, akange akambofarira mumwe munhu uye zvinhu zvaitaridzika kunge zvirinani pane izvo zvaakange azvisarudzira iye zvino .
Sezvo zvaakazoziva nezve mamiriro ake, izvo zvino zvakamutorera mamwe marwadzo kurangarira zvakapfuura. Izvo zvaive zvisisina basa nekushanya kwaaizenge akasiya kusvikira asvika ipapo, mune iyo inoshoreka mamiriro emunhu akashungurudzika, akakuvara murume, kusekwa nevasingazive, nekuti aiziva kuti chero muyero muhupenyu hwake haungave wakanaka. Kuseri kwezvipingaidzo zvaakange akagadzira zvakapoteredza moyo wake, fungu rekuzvidemba rakamuka. Ndinoshuva kuti dai ndaigona kudzokera.
Aizoita chero chinhu kugadzirisa hupenyu hwake, kudzoreredza simba remuviri wake watove kushanda, asi aiziva kuti chete marwadzo aainzwa, ipapo panguva iyoyo, aisakwanira kudzima chikwereti chehunhu chehupenyu hwakatambiswa.
Kusuruvara kwekuburitsa kunze kwake kwese manzwiro, ipapo, pasi peziso revanoda kuziva, kwakamusiya aine chirevo chakakombama chekurwadziwa, zvisinei, muviri wake waive usina kugadzikana, usina hanya, usingatendeseki. Musodzi unorwadza wakayerera pamusoro pake, izvo zvakakanganisa kuona kwake zvakanyanya. Yakapunzika ikaita kusurukirwa, kurira kwekuchema, kuchema kubva kune mumwe munhu akakundikana zvinosiririsa. Mumadhaka emisodzi, dzimwe ndangariro dzichiri kushambira. Akange achichema hupenyu hwake. Ainge achichema zvake.
Kwechinguva, miromo yake yainzwa kuoma, akange ave nenyota uye muviri wake, uyo waive wakashama kare, zvino waiita kunge unorema kunyangwe waive wakarara pasi. Panguva iyoyo akanzwa ruzha rwe sairini yeamburenzi yaiuya. Zvekare maziso ake akange asisaone. Dzimwe ndangariro dzakabuda. Akarangarira kuti achiri mukomana aifarira kubatsira amai vake nebasa repamba. Nei wakarega kuzvifarira?
Anonzwa kuputika muchipfuva chake uye zvinonyanya kuwanda, ropa richidonha richinyorovesa ivhu remumugwagwa. Ambulance inosvika.
Unondinzwa here changamire? Aya ndiwo mazwi emutsa ekupedzisira aainzwa, akataurwa kwete newaanoda, asi nemunhu waasingazive, kunyangwe mukubatana, mutorwa uyo maziso ake aive asisaone. Akada kupindura, asi akashaya simba uye mazwi haana kutyora inertia yemiromo yake yakachenuruka.
Akanzwa mutumbi uchizvuzvurudzwa, pakati pevanhu vaiona chiitiko ichi. Aida kuvhura maziso ake kuti aone kupenya kwenyika, akaedza kufema zvakadzama, zvekare, asi muviri wake hauna kudaira, uye mwenje wakazodzimwa.
Vanhu vaivepo hapana chavaiziva nezve tsotsi iri. Ivo vaisaziva kuti mangani mhosva kana mutoro wemhosva wavaive vakatakura nawo. Aive tsotsi senge vakawanda. Mbavha, kunyangwe maziso ake akange atodzimaidzwa nehusiku hwekufa, aingoziva zvake, kuti aive mwanakomana ane moyo wakaoma, amai vake vaizove nemoyo wakaputsika uye uyo baba vake vangadai vasina tarisiro zvachose maari. Uye moyo wake usati waridza pekupedzisira, aida kununura musimboti wehunhu hwake, zvinangwa zverudo nekururamisira, akadzidziswa pane imwe nguva murwendo rwake rwune njodzi.
Ambulensi payakaenda, vaiona vakatanga kupararira uye mugwagwa wakazoita wakajairika. Mumwe murume aishanda pamberi penzira yemugwagwa akakanda bhagidhi remvura muropa raive richiri kudziya, achibvisa zvisaririra zverufu chero rupi zvarwo. Ipo mvura ichisuka nzira, ichiita mugwagwa runyararo zvakare, mumhepo pakanga pachine kunzwa kwekuti murume iyeye, ipapo, panguva iyoyo, mbiru dzerudo neruramisiro dzakaratidzirwa zvisingaite pakati pedenga nepasi, nzvimbo uko vanhu vese vachatarisana napo.